के हो क्रिएटिनिन ? यसको स्तरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? – Health Post Nepal
२०७९ जेठ ८ गते १२:०५
क्रिएटिनिन मानिसको रगत तथा पिसाबमा पाइने विकार पदार्थ हो। यसको परीक्षणबाट थाहा पाइन्छ मिर्गौलाले कति राम्ररी काम गरेको छ भनेर। सामान्य परिस्थितिमा मिर्गौला आफैं यस्ता विकार पदार्थलाई छानेर शरीरबाट बाहिर निकाल्न सक्षम हुन्छ। तर कहिलेकाही स्वास्थ्य समस्या आउँदा यो प्रक्रियामा अवरोध आउँछ र शरीरमा क्रिएटिनिनको मात्रामा वृद्धि हुन्छ।
हरेक मानिसको शरीरमा क्रिएटिनिनको स्तर अलग–अलग हुन्छ। पुरुषमा ०.६ देखि १.२ मिलिग्रामसम्म हुन्छ भने महिलामा ०.५ देखि १.० मिलिग्रामसम्म हुन्छ। किशोर उमेरकाहरुमा पनि ०.५ देखि १.० मिलिग्रामसम्म हुनु जरुरी छ। बालबालिकाहरुमा ०.३ देखि ०.७ सम्म हुनुपर्छ।
मिर्गौलालाई स्वस्थ बनाइराख्न क्रिएटिनिनको स्तर नियन्त्रण गर्न या कम गर्न उचित कदम उठाउनु जरुरी हुन्छ।
शरीरका विभिन्न समस्याका कारण क्रिएटिनिनको स्तर अक्सर बढ्ने हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार बढीभन्दा बढी काम गर्नाले शरीरका विभिन्न अंगले पनि राम्रोसँग काम गर्छन् र रक्तसञ्चार पनि राम्रोसँग भइराख्छ। तर यसो गर्दा पनि क्रिएटिनिनको स्तर बढ्छ भने चिकित्सकीय सहयोग लिनु जरुरी हुन्छ।
शरीरमा क्रिएटिनिनको स्तर बढ्नुका पछाडी मिर्गौलामा देखिएको संक्रमण प्रमुख कारण हुनसक्छ। यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिए मिर्गौला फेल हुने खतरा हुन्छ। मिर्गौलामा संक्रमण देखिए ज्वरो आउने, कमर दुख्ने, पेटको तल्लो भागमा पीडा हुने, बारम्बार पिसाब लाग्ने, बान्ता आउने जस्ता लक्षण देखिनसक्छ।
उच्च क्रिएटिनिनका कारण ब्लड सुगर पनि उच्च हुन्छ। टाइप १ र टाइप २ डाइबिटिजको खतरा बढी हुन्छ। भोक र तिर्खा लाग्नु, पटक–पटक पिसाब लाग्नु, आँखा कम देख्नु या धमिलो देख्नु यसका लक्षण हुन्।
यसका अतिरिक्त हृदयघात र मुटुका अन्य रोगहरुले पनि मिर्गौैलाको कार्यक्षमतामा असर पुग्छन्। यसले गर्दा क्रिएटिनिनको लेभल पनि बढ्छ। छाती दुख्ने, जिउ दुख्ने, कमजोरी, अनियमित धड्कन मुटु रोगका लक्षण हुन्।
क्रिएटिनिनको स्तर कसरी नियन्त्रण गर्ने?
प्रोटीनको सेवन कम गर्ने
पोषक तत्वमा प्रोटीन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। शरीरलाई यो चाहिन्छ पनि। तर, आवश्यकताभन्दा बढी प्रोटीन सेवन गर्नाले क्रिएटिनिनको स्तर पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले प्रोटीनयुक्त खाद्यपदार्थको सेवन कम गर्नुपर्छ।
बढी फाइबरयुक्त खाना खानुपर्छ
फाइबर पेटका लागि राम्रो मानिन्छ। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बढी फाइबर सेवन गर्नाले क्रिएटिनिनलाई नियन्त्रण गर्न मद्धत मिल्छ। फल, तरकारी, गेडागुडी, दाल खानाले क्रिएटिनिनलाई नियन्त्रण गर्न मद्धत पुग्छ।
बढी पानी पिउने
हरेक मानिसलाई बढीभन्दा बढी पानी पिउने सल्लाह दिइन्छ। कम पानी पिउनाले शरीरमा क्रिएटिनिनको स्तर बढ््न सक्छ। त्यसैले पानी या तरल पदार्थ जतिसक्दो बढी पिउनुपर्छ।
नुन सेवन कम गर्ने
बढी नुन सेवनले रक्तचाप बढ्ने समस्या हुन्छ, जसले मिर्गौलालाई सिधा असर गर्छ। र, यहीकारण क्रिएटिनिनको स्तर पनि बढ्छ। त्यसैले दैनिक खानामा नुन कम गर्नुपर्छ। दिनमा दुईभन्दा बढी चम्चा नुन बिर्सेर पनि सेवन गर्नुहुन्न।